देशमा विध्वंस, लुटपाट मच्चाउँदै आएको एउटा समूहलाई विध्वंस नगर भनेर हामीले एक वर्ष सम्झायौं तर भएन । त्यसपछि हामीले निषेध ग¥यौं । रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई शान्तिसुरक्षा गर्न खोजेको, बम पड्काउन नदिएको, बन्दुक पड्काउन नदिएको, मान्छे मार्न नदिएकोमा गाली गरिएको पनि सुनियो । अनि गृहमन्त्रीले के गर्ने, लुटपाट गर, बम पड्काउ बाबु हो भन्ने ? हामी विकासतर्फ जाने हो भने गृहमन्त्रीले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? के अब नेपालमा क्रान्ति आवश्यक छ ? क्रान्ति गरेर ल्याउने के ? कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार भन्दा बढ्ता ल्याउने के ? कसैलाई अलिकति अधिनायकवादतर्फ जाने रहर होला । आजको दुनियाँमा अब नेपालमा हिंसा मच्चाएर त्यसलाई क्रान्ति भनेर सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने ठानेको छ भने त्यो सपनाको छेउ पनि होइन । त्यस्तोबाट आउने तथाकथित क्रान्तिले ल्याउँछ के ? लुटपाट गर्न पल्केका कार्यकर्ता, लुटपाट गर्ने मात्र बुद्धि र सीप भएका कार्यकर्ताले बनाउँछन् देश ?
तथाकथित लोकतन्त्रवादीहरूले भने, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । कहाँ थियो पार्टी ? कहाँ छ पार्टी ? कुन कार्यालयमा दर्ता भएको पार्टी माथि प्रतिवन्ध लाग्यो ? कुनै सिडिओ कार्यालय दर्ता थियो कि ? गृह मन्त्रालयमा दर्ता थियो कि ? या कसैको घरमा दर्ता थियो कि ? कहाँ दर्ता छ त्यो । कहाँ छ त्यो पार्टी ? हँुदै नभएको लाई प्रतिबन्ध कसले लगाउँछ ? एउटा गिरोहका नाममा उत्पात मच्चाइएको छ । प्रतिबन्ध लगाइएको उत्पाताथि हो । लुटपाटमाथि हो । पार्टी त छँदै छैन केको प्रतिबन्ध लगाउनु ? तर, जेसुकै भए पनि यो कम्युनिस्ट पार्टीको सशक्त सरकार हो, यसले सामाजिक अपराध, अराजकताजस्ता कुरा हुन दिँदैन । कम्युनिस्टको बर्को ओढेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन । कम्युनिस्टको बर्को ओडेपछि लुटपाट गरे पनि हुन्छ, मारे पनि हुन्छ भन्ने होइन । एउटा आन्दोलनको सन्दर्भ हुन सक्छ । हिजो एउटा आन्दोलनको सन्दर्भ थियो । त्यो अध्याय समाप्त भएको छ । अबको प्रयास भन्दा कम्युनिस्ट सरकार हटाउने रे ! कांग्रेसले उनीहरूलाई समर्थन गरिराखेको छ । कठैबरा कांग्रेस कहाँ पुग्यो हेर्दाहेर्दै । हेर्दाहेर्दै कांग्रेस सर्पको खेल जस्तो ९९ मा पुगेको एकैचोटि २ मा । वैचारिक स्खलन पनि सकियो । कम्तीमा विचारमा त कांग्रेस लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, त्यो पनि छैन । आजका उनीहरूका मन्तव्यका शृंखलाहरू भोलि हेर्दा के ठहरिन्छन् ? देशमा विखण्डनवाद समाप्त पारियो, त्यसमा कांग्रेसहरू छाती पिटेर रोएका छन् । अचम्मको रुवाबासी छ । अर्कोतिर, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न विध्वंस, लुटपाटं र वितण्डालाई निषेध ग¥यौं । यसमा पनि किन निषेध गरेको भन्दै छाती पिट्न थाल्नुभएको छ । कांग्रेसका यी पक्षहरू देखेर मलाई टिठ लाग्छ । कांग्रेस एउटा पुरानो पार्टी हो । लोकतन्त्रका निम्ति लडेको पार्टीले यसप्रकारका अत्यन्तै अल्पदृष्टिका सोच विचार प्रकट गर्नु दुःखलाग्दो कुरा हो ।
यतिबेला हाम्रो पार्टी नेकपाका कोही नेता–कार्यकर्ताले कुनै प्रकारको भ्रममा नपर्दा हुन्छ । हाम्रो काँधका असाधारण जिम्मेवारी आएको छ र हामीलाई दुनियाँका प्रगतिशील जनताले हेरिरहेका छन्– शान्तिपूर्ण बाटोबाट जनताले आफ्नो हातमा सार्वभौमसत्ता लिन सक्ने रहेछ, त्यो नेपालबाट सिकौं भनेर । हिंसा भइरहेका ठाउँहरूले, हिंसा कसरी अन्त्य गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसका निकायहरूले समेत हामीलाई हेरिराखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति विश्वविद्यालयले मलाई आमन्त्रण गरेर त्यहाँ हामीले पाएको सफलताको सम्मानस्वरूप विद्यावारिधि दियो । त्यो म एक जनालाई दिइएको होइन, शान्तिको क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेको सफलतालाई सम्मान गरिएको हो । हामीले सानो काम गरेका छैनौं । हामीले नेपालको संक्रमणकालको अन्त्य कसरी ग¥यौं भन्ने त्यहाँ मैले बताएँ । त्यसले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । यसरी विश्वका जनता हामीतिर हेरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले कुनै पनि आवेगमा होइन, भावनामा दौडने होइन । भावनाले क्रान्ति हुँदैन । क्रान्ति र परिवर्तनका लागि सही नीति, सही ग्राउन्ड, सही संगठन चाहिन्छ ।
हाम्रो पार्टीको यत्रो ठूलो संगठनमा कहिलेकाहिँ कुनैकुनै कुरामा साथीहरूलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । तर त्यो चित्त बुझ्ने समय आउँछ, हामी काम गर्दै गयौं भने । मलाई पछाडी पारियो भन्ने कोहि साथीले ठानेको हुन सक्छ । म भन्न चाहन्छु– ढुंगाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पीपल । यदि हामी लगातार, दृढताका साथ, बाटो नबिराईकन काम गर्दै गयौं भने ढुंगाको काँप फोरेर पनि पीपल उम्रन्छ । सफलताको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । पार्टीले मूल्यांकन गर्छ नै । कहिलेकाहीँ एकीकरणका यस्ता जंजरहरूमा समुचित मूल्यांकन नपुगेको पनि हुन सक्छ । यस्ता एकीकरणका सन्दर्भमा कहिले कहिले यथार्यमा अलिकति भागबन्डाको कुरा पनि हुन्छ । त्यो भागबन्डको कुराले कहिले योगदान, योग्यताका, इतिहासका कुरा ओझेल परेका पनि हुन सक्छन् । तर त्यो समयक्रममा आफैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान्छ । पानीले आफ्नो तह आफैं मिलाउँछ भनेझैं प्रतिस्पर्धा, संगठनले आफ्नो लेभल आफैं मिलाउँछ । एउटा खास जंजरमा भएका केही कमीकमजोरीलाई अर्को समयक्रममा मिलाउँदै जान्छ । त्यसकारण हामी आत्तिनु, हड्बढाउनुपर्नेछैन । हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै दृढताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो दायित्व हो । त्यो दायित्वमा स्पष्टता आजको हाम्रो खाँचो हो ।
७० वर्षको हाम्रो इतिहास गौरवपूर्ण छ । बीचमा हामी कहिले कहिले टुक्रा–टुक्रा, धुजा–धुजा भयौं । कहिलेकहिले अस्तित्व नै छ कि छैन जस्तो भयो । कहिले कहिले प्रतिक्रियावादीहरूको दिग्विजय चल्यो । कहिलेकहिले दक्षिणपन्थीहरूको एकछत्र रजाइँ भयो । वैचारिक रूपमा हामी कता हरायौं कि जस्तो भयो । तर, हामीले फेरि आन्दोलनलाई उठाएर ल्याएका छौं । आन्दोलन एकछिनको विषय होइन । एउटा जुलुसको, एउटा आमसभाको आयोजना होइन । सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन हो, समय लाग्छ । मेरो आफ्नै जीवनमा ५४ वर्षदेखि म निरन्तर लागेको छु । अहिले मैले भनेका सबै तीता अनुभवहरू मैले अनुभव गरेको छु । पराजित भएर, समातिएर, मुन्ट्याएर, हतकडी, नेल लगाएर गोलघर हालिएका, लात लगाइएका अनुभवहरू पनि हामीले झेल्नुपर्यो । त्यसबाट उठेर आउनुप¥यो । अर्थात, सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन एक क्षण, एक दिन, एक महिनाको आन्दोलन होइन । यसले समय लिन्छ । हामीले ज्यादै सजगता र सचेतनाका साथ अनवरत दृढतापूर्वक आन्दोलनलाई अगाडि बढायौं । प्रतिकूल अवस्थामा पनि हरेस खाएनौं । सही बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्यौं र सफलतामा पुग्यौं ।
अब यस सफलतामा सिँढी थप्दै जानु छ । विकासको पनि हामीले जग, आधार बनाएका छौं । गएको वर्षलाई मैले आधार वर्ष भनेको छु । जहाँ कानुन बनाउनेलगायत सारा काम गर्नु थियो । अहिले काम भएन भन्ने हल्ला छ । तर महाकाली अञ्चलका साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, महाकालीमा मात्रै दुई देशका बीचमा कि त मान्छेहरू तुइनमा कि त ट्युबमा तर्थे । आज झोलुंगे पुलले ती चीजहरू विस्थापित गरेको छ । आज बाटाहरू बनेका छन् । नदी नियन्त्रण भएको छ । नयाँ ढंगले विकासको गति अगाडि बढेको छ । प्रदेश ३ मा पनि फास्ट ट्र्याकदेखि लिएर धेरै काम हामीले गरेका छौं । काठमाडौंको सडकमा अलिक भनेजस्तो व्यवस्था गर्न भ्याएका छैनौं । यसका पछाडि केही संवेदनाका कुराले विलम्ब भएको छ । मेलम्ची आएपछि सडक बिगार्छ भन्ने कुराले ढिला भएको छ । हामी मेलम्ची पनि छिट्टै ल्याउँछौं । छिट्टै बाटाहरूलाई स्तरोन्नति पनि गर्छौं । यस वर्ष इतिहासमा कहिल्यै नभएको ८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ देशमा । बन्दरगाह नयाँ लिएका छौं । चीन तर्फका बाटा खोलेका छौं । अनि केही भएको छैन भन्नेहरूलाई म कहाँ पठाइदिए म पावरवाला चस्मा लगाएर पठाइदिने थिए । धेरै रफ्तारमा हामी अघि बढिरहेका छौं । त्यसकारण, हामी हल्लाका पछाडि नलागौं । राष्ट्र निर्माणको संकल्पका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । यसमा जति सकिन्छ सबैले आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गरौं । (सम्बोधनमा आधारित)